Myanmar News – Page 247 – Trusted And Updated In Myanmar
အကျပ်အတည်းအမျိုးမျိုးမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ ဂါထာတော်
October 30, 2018 - by adminpph - LeaveaComment
မေတ္တာသုတ်တော် တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ စပြီး အဓိဌာန်ဝင်ပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့..တနင်္ဂနွေထောင့် ..မေတ္တာသုတ်တော် ၆ခေါက်….၊ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွား မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီးကန်တော့ပါ။ မိမိကုသိုလ်အလုပ်အားလုံးပြီးစီးသည့်အခါ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျတို့ကို မေတ္တာပို့အမျှျေဝပါ။ တနင်္လာနေ့…သောကြာထောင့် မေတ္တာသုတ်တော် ၂၁ခေါက်…၊ သောကြာနေ့ဖွား မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါင်းကို ရည်မှန်းပြီးကန်တော့ပါ။ မိမိကုသိုလ်အလုပ်အားလုံးပြီးစီးသည့်အခါ သောကြာဂြိုဟ် နတ်မင်းကြီးကို အမှုးထားပြီး ဝေနေယျတို့ကို မေတ္တာပို့အမျှျေဝပါ။ စသည်ဖြင့်……………..အထက်ပါအတိုင်း အတိုချုံးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ….. အင်္ဂါနေ့..ရာဟုထောင့် …
ငွေကြေး အခက်အခဲကြုံတဲ့ အခါတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရွတ်ဆိုလိုက်ရင် ချက်ချင်း ပြေလည်သွားစေတဲ့ လာဘ်ရွှင် ဂါထာတော်
အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော် Zawgyi Version ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား၊ ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား ယုံကြည်မှုနှင့် ရွတ်ဆိုသင့်သော အရဟံပဋ္ဌာန်း လာဘ်ပွင့်ဂါထာတော်တရားဓမ္မ… အကြွေးဆပ်စရာရှိနေတာလား? အကြွေးတွေမရပဲဖြစ်နေတာလား? ငွေကြေး လာဘ်လာဘတွေ ပိတ်ဆို့နေတာလား? ငွေကြေးအတွက်စိတ်ပူနေရတာလား? သောကများနေရတာလား? ဤဂါထာကို ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင် အဓိဌာန်တင်ပြီး ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ရပါမယ်။ တစ်နေ့ကို ၂၄ခေါက်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။၂၄ရက်တိတိ နေရာမှန် အချိန်မှန်ရွတ်ဆိုရပါမယ်။ မိမိ မွေးနေ့ကစတင်ပြီး …
သုံးလသာ ခံတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် သက်တော် ၉၀ ထိလက်ရှိနေထိုင်နေသော အသဲကင်ဆာ ပျောက်ဆေး…
October 29, 2018 - by adminpph - LeaveaComment
အသဲကင်ဆာ ပျောက်ဆေး Zawgyi version ဒီဆေးနည်းသိတာကြာပါပြီ။ ဆေးပင်ဓါတ်ပုံမရှိတာနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဓါတ်ပုံရပြန်တော့လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ တလောက အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က သူငယ်ချင်း စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသဲကင်ဆာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံတက်တဲ့အကြောင်း သူ့တပည့်ရဲ့ FB မှာတွေ့ရတယ်။ ဒီဆေးနည်းလေးပြောပြလိုက်ပါလို့တော့ ပြောမိရဲ့။ ပြောသလားတော့ မသိ။ ယနေ့တော့ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းသူတစ်ဦးရဲ့ဆွေမျိုးတစ်ဦး အသဲကင်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြန်တယ်။ သူ့ဆွေးမျိုးက မြန်မာပြည်မှာပါ။ အသဲကင်ဆာဆိုရင် …
အဆုတ်ကင်ဆာ​၊ ချောင်းဆိုး၊ တီဘီရောဂါများ အတွက် အလွန်ကောင်းသော တောလေးညှင်းအစွမ်း
တောလေးညှင်းအစွမ်း ဆရာဝန်လက်လွှတ်လိုက်ပေမဲ့ အားတက်လာတဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာဝေဒနာရှင်ဆရာဝန်က တလခွဲပဲ ခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာဝေဒနာရှင် ၃လရှိပြီတဲ့။အသိမိတ်ဆွေကညွှန်လို့ တောလေးညှင်းအဆုတ်အားဆေးသောက်တာပါတဲ့။ ချောင်းဆိုးတာလည်းသွေးမပါတော့ဘူးတဲ့။ကင်ဆာဝေဒနာရှင်ရဲ့ သမီးက စိတ်မဆိုး တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်လာရင်းပြောပြသွားတာပါ။နောက်တခေါက် လာရင် အသေးစိတ်မေးပြီးထပ်တင်ပေးမယ်နော်။ဆေးလိပ်သမားများအတွက် အဆုတ်သန့်စင်လိုသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော တောလေးညှင်းပါ။မိုးတွင်းအခါ လယ်ကွင်းထဲတွင် အလွန်ပေါများစွာ ပေါက်သော အပင်ပါ။ လယ်သမားများ စပါးစိုက်ခြင်းကို နှောက်ယှက်လို့ စိတ်ညစ်ရသောအပင် ဖြစ်သည်။သို့သော်ဆေးဖက်အလွန်ဝင်သော အဆုတ်သန့်စင် အားကောင်းဆေးပါ။အရိုးစိမ်း နှင့် …
ပိုင်အိုးနီးယားစားသောက်ဆိုင် ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံး ဖြစ်လာအောင် ခက်ခဲစွာ ကြိုးစားခဲ့ရပုံကို ပြောပြလာတဲ့ ဇော်မိုး ပိုင်အိုးနီးယား
၁၄ နှစ်သားပိုင်အိုးနီးယား 14years_Old ( 18/07/2004 -2018 ) ၁၃နှစ်သားပိုင်အိုးနီးယား အကြောင်းတင်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မည်သို့မည်ပုံ Fbပေါ်မှပျောက်သွားသည်မသိ။အခု(၁၄)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအဖြစ်ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ဒီနေ့(၁၈.၇.၂၀၁၈ )ဟာ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောက်ဆိုင် ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပါ။အဖေနဲ့အမေရဲ့ ယုံကြည်စွာ တာဝန်ပေးမှုနဲ့အတူ…ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာ၊ကံ၊ဥာဏ်၊လုံးလ၊ဝီရိယ တို့ကို အရင်းတည်ပြီး နေ့/ညမပြတ် ရိုးသားစွာကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ရလာဒ်တစ်ခုကတော့ ယနေ Pioneer Food Centre ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ခု စားသောက်ဆိုင်လောကမှာ အခိုင်အမာရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ ။ …
Lion Air လေယာဉ်ပျံ ပျက်ကျခြင်းမှ ၁ ယောက်တည်းသော ကံအကောင်းဆုံးလူသား
October 29, 2018 October 29, 2018 - by adminpph - LeaveaComment
၁၈၉ ယောက် သေဆုံး Lion Air လေယာဉ်ပျံ ပျက်ကျခြင်းမှ ကံအကောင်းဆုံးလူသား လက်ရှိ အင်တာနေရှင်နယ် မီဒီယာမှာ ကမ္ဘာ့ကံအကောင်းဆုံး လူသားဆိုပြီး ဖော်ပြပြခြင်း ခံနေရတဲ့သူပါ။ ယနေ့ ပျက်ကျသွားတဲ့ Lion Air လေယာဉ်ကို လက်မှတ် ဝယ်ထားပြီးမှ လေယာဉ်မမှီလိုက်လို့ မလိုက်လိုက်ရဖြစ်သွားပြီး အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သူပါ။ သူ့နာမည်က Sony Setiawan ဖြစ်ပြီး မြို့တွင်းမှာ …
ထိုက်သူစံကြရပြီပေါ့… ငွေသား ၁၃၆ သိန်း ၉၂၀၀၀ိ… ရွှေထည်များအတွက် ပန်းတိမ်ဆရာများပါ ခေါ်ထားရပါတယ်
သံဝေဂ ရကြပါစေ … ကိုယ့်နောက်ပါမသွားသော ရွှေ ငွေ များ သေဆုံးသွားသူရဲ့ကျန်ရှိရွှေငွေပစ္စည်းတွေ တန်ဘိုးဘယ်လောက်မှန်းမသိရသေး စစ်ဆေး ရေတွက်နေကြဆဲပါ တူ တူမတွေ ခွဲဝေပေးဘို့ ရပ်ရွာလူကြီးများ အသိသက်သေထားပြီး ငွေများရေတွက်နေကြတာပါ အော် ထိုက်သူစံကြရပြီပေါ့ ရွှေထည်များအတွက် ပန်းတိမ်ဆရာများပါ ခေါ်ထားရပါတယ် ငွေသား ၁၃၆ သိန်း ၉၂၀၀၀ိ/ ရွှေ ၁၃ ကျပ်သားကျော် ကျောက် …
ကျန်းမာခြင်းသည်လာဘ်တစ်ပါး Zawgyi Version အကြောညပ်ရောဂါသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အောက်ပိုင်း ခါး ပေါင် နှင့် ခြေသလုံး တို့တွင်ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။ အကြောညပ်ရောဂါသည် အလွန်ခံရခက်သည်။ ၂၄နာရီပါတ်လုံးခံစားနေရသည်တော့မဟုတ်ပါ အကြောက အညပ်ခံရလိုက် ပြန်လွတ်သွားလိုက်ဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်။ အကြောညပ်ဝေဒနာ ခံစားနေရချိန်တွင်အနေခံခက်လှသဖြင့် စိတ်ဓာတ်ပင်ကျချင်လာတတ်သည်။ အကြောညပ်ဝေဒနာ မသက်မသာဒုက္ခခံစားနေရရာက အကြောညပ်ခြင်းမှ ပြန်လွတ်သွားသောအခါ ခံစားရသောသုခသည် အလွန်ပင်တန်ဘိုးရှိကြောင်း ခံစားသိရှိမိတော့သည်။ (ဒါ့ကြောင့်ပင် ကျန်းမာခြင်းသည်လာဘ်တစ်ပါးဟုဆိုကြရပါသည်) ယခုဆက်လက်၍ …
ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများအတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်
ကျီးပေါင်း တက်နေသူများအတွက် Zawgyi Version ဂုတ်၊ ဇာတ် ကျီးပေါင်း တက်နေသူများအတွက် ဗန်ဒါရွက်လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ဂုတ်၊ ဇက် ကျီးပေါင်းတက်နေသူများ ဗန်ဒါရွက်လေးကိူခူးလိုက်ပါ။ ရေမဆေးပါနဲ့ အရွက်မှာကပ်နေတဲ့ ဖုန်လေးတွေကို အဝတ်နဲ့ ပွတ်သုတ်လိုက်ပါ။ အရွက်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ အညှာအရိုးတံလေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂုတ်ပေါ်နဲ့ ဇက်ပေါ်ကိုအရွက်ကို ခွပီးကပ်ထားလိုက်ပါ။ ပုံမှာကြည်ပါ။ အချို့က အကြမ်းဘက်က ကပ်ရမှာလား အချောဘက်က …
မြွေ အဆိပ်အမျိုးမျိုး နှင့် ရောဂါ (၁၈) ပါး ကို ပျောက်ကင်းနိုင်သော ကြောင်လျှာသီး ကြောင်လျှာရွက် ကြောင်လျှာပင်
ကြောင်လျှာသီး ကြောင်လျှာရွက် ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae) ဥုံ … မြန်မာ့တိုင်ရင်းဆေးပညာ အသစ် တဖန် ပြန်လည် ထွန်းကားပါစေသော် … ကြောင်လေးပင် မြွေနှင့် အဆိပ်မျိုးမျိုး နိုင်နင်းသော ဆေး ဖော်စပ်ရာ၌ အသုံးပြု …
မြမြ ကိစ္စ နောက်ထပ်တစ်ဦးသို့ ထပ်မံ ပူးကပ်ပြောသည့် ဗီဒီယိုများ
ကျီးပေါင်း ကိုယ်တွေ့ ပျောက်ကင်းဆေးနည်း။
အမျိုးသမီးများ မီးယပ်သွေးဆုံးခြင်းအတွက် အလွန်ထိရောက်သော ဆေးနည်းလေးပါ။